एउटा चिकित्सकको चित्कार शवलाई सम्मान गर्ने सभ्याता संकटमा पर्यो सहयोग गर्नुहोस
इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज ११ साउन २०७७ 1761 पटक पढिएको
एक दिन अघि सामाजिक संजालमा डा.निरज सिंहले सम्मानजक मृत्युको बिषयमा मार्मिक पोष्ट साझा गर्नु भयो । मरच्यूरी क्याबिनेट विथ रेफरिज्रेटर (फ्रिजर)को आवश्यकताको बारेमा उहाँले पोष्ट साझा गर्नु भएको हो ।
पर्सामा बिपत ब्यवस्थापन समितिका कतिपय बैठकमा उहाँले यो कुरा उठाउदै आउनु भएको थियो । तर बैठकमा डा.निरज सिंहका कुरालाई गम्भिरतापूर्व लिने भन्दा पनि हाँसेर उडाउने धेरै थिए ।
आज परिणाम हेर्दा डा.सिंहले उठाएको कुरा बेलैमा ब्यवस्थापन गर्न सकेको भए मृत शरिरले पनि सम्मान पाउथ्यो । तर आज आफन्तजन इष्टमित्र धन सम्पती हुदा हुदै पनि शवहरु बेवारिसे भएका छन ।
बिपत ब्यवस्थापनका नाममा बैठक गोष्ठी र सेमिरनारहरु भए । त्यसमा फगत भाषण बाहेक केही हुदो रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि यतिवेला आएर भएको छ ।
बीरगंजको अस्थायी कोभिड अस्पताल जुन सम्झौता अनुसार साउन १८ गते सम्मकालागि मात्र त्यो भवन उपलब्ध गराइएको छ । जसको नविकरण नहुने चर्चा चलिरहेको छ । दैनीक संक्रमीत फेला परेको यो अवस्थामा अव होम आइसोलेशनको प्रोटोकल पनि आएको छ । लक्षण सहितका संक्रमीत बढे भने के हुन्छ ? यसको जवाफ दिने कोही देखिदैन ।
कोभिड अस्पताल गण्डकमा आइतवार बिहानर एक ब्यवसायीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । उहाँको शव अहिले पनि अस्पतालको इमरजेन्सीमा छ । इमरजेन्सीमा ७ वटा बेड रहेका छन ।
त्यो शव त्याहा बाट ब्यवस्थापन नगर्दा सम्म इमरजेन्सी वार्ड नै उपयोग बिहिन हुन्छ । यो बेलामा डा. निरज सिंहले दिएको सुझाव अनुसार शव राख्नकोलागि मरच्यूरी क्याबिनेट विथ रेफरिज्रेटरको ब्यवस्था गर्न सकेको भए इमरजेन्सी उपयोगमा पनि आउथ्यो र शवले अन्तिम शतगत नहुदा सम्म सम्मानपूर्ण ठाउ पाउथ्यो ।
ब्यवस्थापकिय हिसावले जिम्मेवार निकायहरु चुक्नुको परिणाम हो यो । आज एउटा मात्र ब्यक्तिको मृत्युले यो अवस्था ल्याएको छ । यो मानव सभ्यातालाई नं संकटमा पार्न सक्ने महामारीमा अन्य पनि मृत्युका घटना हुन सक्छन भन्ने कुराको हेक्का ब्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले लिन जरुरी छ ।
डा. सिंहले आफ्नो पोष्टमा ब्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले यस्तो कुरा नबुझेको हुनाले नै आम दाताहरु गुहार लगाउनु भएको हो । सरकारले यसलाई गम्भिरता पूर्वक नलिएपछि एउटा चिकित्सकले बीरगंजका दातालाई गुहार लगाउनु भएको छ । बीरगंजका दाताहरुले हरेक संकटमा आफूलाई अगाडि सारेर संकट ब्यवस्थापनमा हातेमालो गरे छन ।
के एउटा शव, भोली त्यसमा जो पनि हुन सक्छ त्यसलाई सम्मानपूर्ण रुपमा राख्नकालागि एउटा चिकित्सकको अपिललाई बीरगंजका दाताहरुले सहयोग पु¥याउने छन ? । ब्यवस्थापकीय रुपमा अवस्था यही रह्यो भने धेरै पर्खिनु पर्दैन हामी असफल हुनेछौ ।